Otu esi eme ka njem di mfe | Otu Di na Nwunye
August 14, 2019 / Ahapụ a Comment
Anyị niile ga-achọ ịga njem dị mfe, ma mgbe ụfọdụ ọ bụghị. Mgbe ụfọdụ, ọ bụghị ihe ntụrụndụ, ma ọ bụ ọbụna ọchị. Mgbe ụfọdụ, n'eziokwu, ọ bụ ihe siri ike na ihe nkwụsị.
Njem nlezianya bụ ụdị kacha njọ, na ihe ụfọdụ, mgbe ụfọdụ, a pụghị izere ya. Anyị enweela oge ndị ahụ, mgbe eziokwu nke ahụmahụ adịghị adaba na atụmanya na obi ụtọ anyị, ma ọ bụ mgbe ihe dị na njem anyị na-adọrọ adọrọ. Maka ndị chọrọ ihe atụ, agala n'ihu anyị njem mbụ na Paris. Ịmụ akwụkwọ French na ụlọ akwụkwọ sekọndrị na idepụta La vie en Paris, na-emepụta ihe niile site na m croissant ga-atọ ụtọ ịgagharị gburugburu Arc de Triomphe, Enwuru m Paris ka ọ bụrụ ihe dị m n'obi.
Eziokwu ahụ dị nnọọ iche. Ọ bụghị nanị na nke a bụ njem m mbụ na Tracy, nke ọzọ, ma echere m na ọ nweghị ebe ọ bụla ga-aga Paris. N'ihi ya, ọ bụghị Paris ka ọ dị na ebe a ga - eme ka m mekwuo ya ka ọ bụrụ ihe ọ na - agaghị emeli - ma ọ bụghị. E nwere ụzọ na ihe ndị na-eme njem dị mfe, Otú ọ dị.
Anyị na-eme njem nke ọma iji mụta ihe dị ukwuu, na mgbe mgbe, ihe ọmụmụ ndị ahụ abaghị uru banyere njem na ihe gbasara onwe anyị. Njem na-akụziri gị banyere atụmanya, banyere eziokwu, banyere oge na-akpali akpali, mana oge ndị ọzọ. Ndị ị na-agụghị na Conde Nast ma ọ bụ hụ na ọ na-ekiri na Channel Travel. Ọ dịghị onye ọ bụla kwuru banyere oge ndị njem ahụ na-adịghị adabere n'ihe ndị ị tụrụ anya ya, ma ọ bụ nyere gị aka ịghọta ihe mere i ji nwee mmetụta dị ukwuu nke nhụfu efu na nlọghachi azụ gị.
O were ọtụtụ ahụmahụ dị ukwuu, kamakwa ụfọdụ ndị ọjọọ, ịmụta ihe ị ga-eme na ihe ị ga-eme. Ọzọkwa, anyị enweela ike ịkọwa ihe mere ọtụtụ ndị ji kwụsị ịkwụsị njem mgbe ha malitere, na otu esi eme ka njem dịkwuo mfe.
Onye edemede bụ onye edemede ukwu nke 18th nke edemede Samuel Johnson dere, sị, "Anyị na-achọ ịtụ anya ya, mgbe ọ bụla a na-atụ anya ka e mechuo anyị ihu ma ọ bụ na-eme ka anyị nwee obi ụtọ, anyị ga-achọ ịtụ anya ọzọ." Ọ bụ n'àgwà anyị ka anyị nwere atụmanya, iji mee ka ụfọdụ ndị chee banyere mmadụ, ebe, maọbụ ahụmahụ, ma anyị aghaghị ịsọ anya atụmanya ndị a mgbe ọ bịara njem. Ọbụna anyị na-eme nke a na mmekọrịta onwe onye - mgbe onye ọlụlụ nwere atụmanya na-ezighị ezi banyere onye nke ọzọ, nke mere na onye nke ọzọ ga-ada. Ònye ga-enwe ike iru atụmanya dị otú ahụ dị elu?
Nke bụ eziokwu bụ na onye ọ bụla n'ime anyị nwere ike ịme ka ọ bụrụ na ọ gaghị abịaru ya nso ma ọ bụrụ na ọ gaghị abịaru ya nso, n'agbanyeghị otú o si dị oke mma, ọ sọkwara ya bụrụ ihe magburu onwe ya. Ebumnuche n'azụ njem ịga nke ọma abụghị atụmanya, ma ngagharị. Onye na-atụ anya na-ekwu "M ga-aga ebe a n'ihi na ekwenyere m na ọ ga-enwe àgwà ndị a, dịka m wuru n'uche m inwe ihe ọ bụghị mara ya mbụ ". Onye nyocha ahụ kwuru "Enweghị m atụmanya, mana m ga-achọpụta ihe dị".
N'okwu dị mfe karị, ihe anyị na-anụ ma gụọ na-emetụta anyị, na mmetụta ndị ahụ na-abanye na tiketi ụgbọelu na nkwari akụ ma ọ bụ ụlọ mbikọ. na enyi gị na-ekwu banyere Peru nwere ike imeghe uche gị ịga ebe ahụ, ma ọ bụ Kedu ọ na-ekwu na ọ na-ese onyinyo gị ma malite atụmanya ụlọ. Ọ bụrụ na enyi gị na-ekwu na ọ dị oke, ọ zuru oke, ọ dị mma ma mara mma, ọ bụ n'ezie nye enyi gị. Ma ọ bụ na ị nwere otu ahụmahụ ahụ dabere na mmasị gị, ihe ndị na-amasị gị na ihe ndị na-amasị gị, na njedebe ọrụ gị.
Ikwesighi igbanye osisi ahu oke elu maka ebe i na-enweghi, o ghaghi iga inyocha kama iga atụ anya. Na nke a, ị ga-ahapụ onwe gị ka iju ma mee ka njem dịkwuo mfe, ma nweekwa ekele maka ihe ọma niile n'ebe ọ bụla ị na-aga.
Njem Njem Nke Onwe
N'ihe metụtara isi ihe gara aga bụ eziokwu na njem bụ ahụmịhe nke onwe gị, ị pụghị ịtụ anya inweta otu ahụmahụ onye ọzọ nwere. Ikekwe onye enyi gị si na ihe a dị n'elu gosiri Peru n'anya n'ihi na ọ bụ onye na-anụ anụ ọhịa, ma ọ bụ onye ọkọ akụkọ ihe mere eme nke na-enwe mmasị ịgụ banyere omenala Incan. Ọ bụrụ na ịchọrọ ọmarịcha pubs, ịzụ ahịa, ma ọ bụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ niile, ị gaghị atụ anya inwe otu mmeghachi omume ahụ n'otu ebe dị ka onye ọzọ. I nweghị ike ime otu ihe ahụ onye ọ bụla n'ezie.
Cheta njem ahụ bụ nkeonwe. Ọ dịghị onye ọ bụla, mgbe ọ bụla, n'akụkọ ihe mere eme nke ihe a kpọrọ mmadụ, enwewo ahụmahụ ahụ n'otu ebe i nwere. Echiche dị egwu, ọ bụghị ya? Ahụmahụ gị, n'agbanyeghị ebe ị na-aga, dịka nke gị. Ọ bụrụ na ịchọrọ ka njem dị mfe, ghọta onwe gị nke mbụ ma ghọta ihe ị na-enwe. Enweghị atụmanya dịka ụkpụrụ onye ọzọ si dị. Nke a nwere ike ịdị mma ma ọ bụ dị njọ, ma ọ bụrụ na ị kwenyere na ị ga-enwe otu ahụmahụ dịka onye nwere ọdịiche dị iche karịa gị n'otu ebe ahụ, ị ​​ga-enwe mmechuihu ọzọ n'ihi inwe ihe ndị na-ezighị ezi.
Egwu bụ ọnwụ nke ihe ọ bụla bara uru. Egwu bu ọnwụ nke obi uto, na imeghe nke inwe na mmuo. Maka ụfọdụ, egwu na-egbochi ma na-egbochi ha ịnweta njem na-eme ka o kwe omume. Ihe ụfọdụ bara uru, ma ọ dịghị ihe kwesịrị ịtụ egwu. Ọ bụ mmetụta na-enweghị isi nke na-enweghị ihe ọ bụla, ma ọ bụghị atụ egwu karị.
N'agbanyeghị ihe ị na-atụ egwu, na otú o si emetụta njem gị, a pụrụ imeri ya. A pụrụ imeri egwu dị elu, dịka m nwere. Ụjọ m na-efe efe na-eduzi m ịkwụsị ọrụ dị ezigbo egwu n'oge m dị afọ na mmekọrịta nke Tracy, dị ka a ga-eji na-agba ọsọ ọ bụla m ga-acha ọcha ma na-arịa ọrịa. Ihe mgbu ahụ mere ka obi ruo m ala ruo mgbe m na-enweghị ike ime ya ọzọ. Na-eche na m mere mkpebi dị ugbu a dịka ndụ dị iche iche, na-emeri ụjọ m, ma ruo mgbe m chere ihu na ọ ghaghị ịchịkwa ndụ m.
Anyị nwere ike na-atụ ụjọ karịa ụgbọ elu. Anyị nwere ike na-atụ egwu ndị ọzọ, omenala ndị ọzọ, na ọnọdụ ndị na-amaghị ama ga-egbochi anyị ịnweta ezi ahụmahụ njem. Mgbe mụ na Tracy kwuru na anyị na-aga na mbara ala dị na Mexico, ọtụtụ n'ime ndị enyi anyị na-eche ma ọ bụ ezi echiche. Anyị maara na ọ dị mma, ma ọtụtụ ndị agaghị efega na Mexico, gbazite ụgbọ ala ma nwee ahụ iru ala na-agbagharị. Anyị mere nchọpụta anyị, kpebiri na ọ dị mma, gbasaa ụzọ anyị, ma tụfuo egwu ahụ.
Ozugbo ị na-ekpebi njem, ị nwere ike ịga njem n'emeghị njem n'egwu. Ị ga-atụfu ịdọ aka ná ntị niile na windo ma jiri ụkwụ na-agagharị na Lima na abalị? Nke ahụ ga-ada ogbi. N'ezie anyị chọrọ inwe ezi uche, ma na-enweghị njikere ịnwale ihe ọhụrụ, njem agaghị akwụghachi gị ụgwọ dị ka ọ kwesịrị.
Ị Na-efu Ọnụ Ego
Anyị maara na mmetụta a ka mma karịa ọtụtụ, dịka na njem ole na ole mbụ anyị na-amaghị, anyị amaghị otú e si emefu ego maka njem. Ihe niile ele anya ịzụ ihe, site na ihe eji eme ihe na ihe ncheta nri na ọkara ọkara na nlekọta njem nleta ọnụ, njem mere ka anyị nwee ego.
Ọ dịghị ihe dị njọ karịa ịnweta njedebe nke njem, ịchọrọ inwe obi ụtọ ma ịmara na ị kwakọba ụgwọ, ma ọ bụ na ị ga-apụ kpam kpam ruo ụbọchị ịkwụ ụgwọ gị. Nanị ụzọ isi merie nke a bụ ịmụta otú e si emefu ego maka njem, na ịghọta ihe mere njem ji bụrụ ọnụ dị ka ọ dị.
Chee echiche banyere ya - ị na-emekwu ihe n'izu ma ọ bụ na ngwụsị izu? Maka onye ọ bụla na-arụ ọrụ n'izu, ị na-emekwu ihe na ngwụsị izu. N'ezie. Ọ bụrụ na ị rụọ ọrụ ụbọchị ole na ole, wee laa Monday na Tuesday? Nke ahụ bụ izu ụka gị. Ị na-etinyekwu ego mgbe ahụ? Jide n'aka na ị na-eme ya. Njem bụ otu izu ụka, ogologo oge. Ọzọkwa, ọ bụ ogologo oge izu ụka ebe ị na-enweghị otu ihe oriri nke ị na-eme n'ụlọ, ị ga-enwe ike ịnweghị ụgbọ ala, na ị nweghị ezigbo ntụrụndụ ebe ị nọ. Ị ga-eme go ebe maka ihe ọ bụla.
Ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ ụzọ iji zọpụta ego mgbe ị na-eme njem, nghọta ị na-emeso ya dịka izu ụka na-aga n'ihu bụ isi. Mara na ị nwere ọtụtụ oge iji jupụta, na oge zuru ezu iji mee ya, ma nwee ọgụgụ isi banyere ya. Lebe anya "ihe ọ bụla ị ga-emeN'obodo gị nke ị họọrọ, dị ka anyị mere na Amsterdam. Chọpụta ebe ogige ntụrụndụ dị. Zụta ngwa ahịa maka ụlọ nkwari akụ ahụ. Were nri n ’iwe iji chekwaa ego.
Ikwesighi imebiga ihe ókè mgbe ị na-eme njem, naanị ị ga-ele ya anya n'ụzọ ziri ezi ma mee atụmatụ ya. Ọ bụrụ na ịchọrọ ime njem ka ọ dị mfe, mee ka ọ dịkwuo mfe na obere akpa gị.
Ị Na-emefu Ego Na Ihe Ọjọọ
Ịkwụ ụgwọ ego na ihe ndị na-ezighị ezi, ebe ọ bụ na njikọ chiri anya na nke ahụ dị n'elu, n'ezie bụ ọdịiche nke onwe ya ma chọọ ederede pụrụ iche. Lekwasị anya na itinye ego na ụzọ na-akwụghachi ụgwọ, na ụzọ ndị ga-enyere gị aka ijikọta ọdịbendị na ahụmahụ ndị na-echefu echefu.
M ga-achọ ịzụta ihe oriri maka ụlọ ahụ ma nweta ego ahụ mụ na Tracy ka anyị nọrọ n'ụlọ nkwakọba akwụkwọ ma nwee biya. Ntak-a? Mkparịta ụka. Ndị mmadụ. Ịmụta banyere ọdịbendị. Anyị abụghị ụdị ịchọta ụlọ oriri na ọṅụṅụ ma ọ bụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ anọ ma ọ bụ ise, anyị agaghị akwụ ụgwọ $ 100 maka nri abalị na mba ọzọ. Mgbe. Ntak-a? Anyị ga - achọ iji ego ahụ mee ihe ọzọ nke na - enye anyị afọ ojuju na obi ụtọ mgbe anyị na - apụ.
Ọ bụ ezie na e nwere nri ụfọdụ anyị ka na-ekwukarị ma cheta ọtụtụ afọ mgbe nke ahụ gasịrị, ọ bụ oge ị na-echeta ihe ọzọ - ma ọ bụ nke ahụ na-etinye oge na ọdịdị, na-ekwurịta okwu na onye bịara abịa, ma ọ bụ na-ahụ ihe ị na-ahụtụbeghị.
Ị bụ Jet-lagged
O nwere ike ịbụ ihe kachasị emetọ nke na-egbochi ndị mmadụ ịga njem ha chọrọ ka ike gwụ ha.
Isi ihe na-eme iji zere ịbụ ndị ike gwụrụ bụ ịghara ịzere jetlag. Nke a bụ otu i si eme ya - tupu ị banye n'ụgbọelu iji gaa ebe ị na-aga, setịpụ ngwaọrụ gị niile na oge ebe. Ọ bụrụ na ị na-apụ na New York ma na-aga London, debe elekere, ekwentị gị, nke gị ihe nile na Oge London. Ọbụna na ngwaọrụ ndị na-edozi na-akpaghị aka, a na-emegharịkarị na "ntọala" ebe ị nwere ike ịtọ oge gị.
Bido iche echiche, mee ihe, ma kwere ya is oge ahụ. Ọ bụrụ na ụgbọ elu gị kwụsịrị na New York na 5: 00pm, n'uche kwadebe maka ya ịbụ 10: 00pm. Chee echiche banyere ịrahụ ụra n'oge na-adịghị anya. Chee echiche banyere ya na ọchịchịrị. Gwa onwe gị na ọ na-eru oge. Mgbe obere oge na-agbatị ụgbọ elu ahụ, ị ​​ga-ahụ onwe gị na ị na-eme ka ọ dịkwuo ala ma ahụ gị na-aza mgbanwe oge ahụ. Ịnwe ike ịrahụ ụra n'elu ụgbọ elu ahụ ga-egbutu gị jet-lag budata, site na nke ahụ, ị ​​gbanweela echiche nke ọma ka oge mgbanwe.
Ọchịchị isi bụ na ọ na-ewe otu ụbọchị kwa awa iji dozie mgbanwe oge. Anyị nwere ike imezi mgbanwe n'otu ụbọchị. Anyị ga-agwụ ike n'ụbọchị mbụ, ma anyị ga-agafe. Ọrụ anyị na-arụ tupu anyị na-akwụ ụgwọ, ma n'otu oge anyị nwere otu ụra nke ụra n'ebe ọhụrụ, a na-agbanwezie anyị na njikere ịga.
Ị Nwere Ahụ Ike
Nke a na-ezo aka na ọnọdụ abụọ dị iche iche, ma ị na-arịa ọrịa ma ọ bụ na ị gaghị enwe ike ịkpụgharị, ịchọpụta, na ịhụ ihe ịchọrọ ịhụ n'emeghị ala. Ọ dịghị ihe dị mfe mgbe ị na-echeghị ahụ ma ọ bụ na-adịghị ahụ ike - karịsịa njem.
Iji zere ịrịa ọrịa na ezumike, anyị na-aṅụ mmiri dị ka anyị nwere ike, zuru ike, rụọ ọrụ ma were vitamin na ihe mgbakwunye anụ ahụ ndị dị mma maka usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ tupu ị na-eme njem. Ụfọdụ n'ime ihe mgbakwunye anyị na-ejikarị agụnye ụwa diatomaceous, ihe mkpụrụ ndụ silica nke na-eme ka ọbara na-edozi ahụ ma na-agwọkwa oyi nkịtị, nakwa dị ka turmeric, bụ ihe bụ isi nke curry powder nke jupụtara antioxidants. Ọ bụrụ na ị nweta ụwa na-acha ọbara ọbara, jide n'aka na ọ bụ nri ọkwa, ma ọ bụghị na ọ bụ inedible. Nchikota a na - egbochi anyị ịrịa ọrịa, anyị ga - akwụkwa ego anyị na - ewere tupu ịpụ na mba ahụ. Ịga na ebe ndị dị nso na ndị nọ ogologo ụgbọ elu nwere ike ịbụ ebe ị ga-esi na-ekerịta germs, ya mere jide n'aka na ị ga-ekpuchi uwe ọcha na ụgbọelu ma jiri ha mee ihe mgbe ị metụsịrị ọnụ ụzọ lavatory ma ọ bụ iri nri.
N'ihe banyere ike anụ ahụ na ọdịmma, ọ dịghị mkpa ka ị bụrụ onye Olympia iji mee njem nke ọma. Otú ọ dị, ị kwesịrị ịdị na-enwe ezigbo ọdịdị iji mee njem ụfọdụ maka ogologo oge ma nwee ezi ahụike obi na-ezighị ezi iji gbochie ịnweta windo. Otu echiche dị ukwuu bụ ịga ije, dị ka ị nwere ike, ugboro atọ ma ọ bụ anọ kwa izu maka ọ dịkarịa ala otu ọnwa tupu ị gaa njem. A ga-eme ka ị kwadoro ka ị na-agagharị, na-enwe mmetụta dịkwuo ntakịrị, ma nwee ike ịhụ ihe niile ịchọrọ ịhụ n'enweghị ike ọgwụgwụ ngwa ngwa!
Ị Nwere Ahụmahụ Ọjọọ Tupu
Eleghi anya ihe kachasị mkpa icheta bụ na ọ dịghị ezumike ọ bụla ị nọworo, ọ dịghịkwa ebe ị nọbu, nwere ihe dị ukwuu na njem ị na-achọ ịbanye. Ahụmahụ ọjọọ mere, mana ọ kachasị mma ịmụta site na ha ma jiri ha kụziere gị ihe ọ bụghị iji mee kama inwe obi uto na njem ma na-ajụ inwe ahụmahụ ahụ.
Mgbe njem Paris, anyị gaara akwụsị. Anyị gaara ejedebe mba anyị abụọ, ma anyị weere ihe anyị mụtara, mee njem dị mfe, ma nwee obi ụtọ. Ka oge gara aga bụrụ oge gara aga, ma kpebisie ike ịnweta ahụmịhe kachasị mma ị nwetụrụla n'agbanyeghị ihe ndị na-agaghị aga n'oge gara aga.
Ọ bụrụ na ịme nke a, ma jiri ndụmọdụ dị n'elu iji lelee njem na ụzọ ọhụrụ, njem ga-adị mfe ma ọ nweghị ihe ga-egbochi gị ịhụ ọtụtụ ụwa ma nweta ndụ ịchọrọ ibi na okporo ụzọ.
Category: inspirational, Self Improvement, Nhazi njem Tags: london, Paris, Peru, njem igwe, njem njem
Ebee Ka Ịchọta Music Fado Na Lisbon, Portual →